baydin_v2a6y1 – Baydin
[ March 7, 2020 ] လပြည့်နေ့မှာ လာဘ်ဖွင့်ပါ	Uncategorized
[ December 18, 2019 ] ဈေးအရောင်းအဝယ် ကောင်းချင်သူများအတွက် အစီအရင် ??	ယတြာ
[ December 8, 2019 ] အရေးကြီးသော ကိစ္စတစ်ခု မမေးမြန်းခင် ဒီအရာလေးကို ပြုလုပ်ကြည့်ပါ	ဗဟုသုတ
[ November 15, 2019 ] ငွေကြေးပြန်ရစေ/ဆပ်နိုင်စေ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ယတြာ	ဗေဒင်
[ November 11, 2019 ] ဂြိုလ်ဝင်နေလား☀☀ ဂြိုလ်တိုင်သွားပါ☀☀☀	ယတြာ
Articles by baydin_v2a6y1
March 7, 2020 baydin_v2a6y1 0
တပေါင်းလပြည့်နေ့ နံနက် ၄နာရီမှ ၉နာရီအတွင်း ရေနွေးကြမ်း ၁ပန်းကန် မိမိအဆင်ပြေရာ သစ်သီး ၃မျိူးတို့ကို ဘုရားလှူပါ ဒိဝါတပတိဂါထာတော်ကို ၂၇ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပါ သစ်သီးများကို နေ့လည် ၁၂နာရီတွင်စွန့်ပြီး အိမ်သားများစားသုံးနိုင်ပါသည်။ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေသူများ အကြွေးဆပ်ရန် အကြွေးရရန်ရှိသူများ မဖြစ်မနေပြုလုပ်ပါ။
ဆန်ထုတ် ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ယတြာ
September 26, 2019 baydin_v2a6y1 0
ဒီ ဓာတ်ရိုက်နည်းကို အမှုအခင်းဖြစ်နေသူများ/ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူများ/ စီးပွားရေး ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဖြစ်နေသူများ /အလုပ်ခွင်တွင် အဆင်မပြေမှု အလွန်များသူများ /အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေသူများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၁. ဆန်တစ်ပြည်ကို ၃ပုံခွဲ၍ ၃ထုတ် ထုတ်ပါ။ ၂. တစ်ထုတ်ကို အိပ်ရာခေါင်းရင်းတွင် ထားအိပ်ပါ။ တစ်ထုတ်ကို ညာဘက်ဘေးတွင် ထားအိပ်ပါ။ တစ်ထုတ်ကို ခြေရင်းဘက်တွင် ထားအိပ်ပါ။ ၃. တစ်ညလုံး အိပ်ပြီး နံနက်မိုးလင်းလျင် ခေါင်းရင်းမှ အထုတ်ကိုချက်ပြီး ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ပါ။ သံဃာတော်များကို […]
စီးပွားရေးအတွက် လာဘ်ပွင့်ရန် ဈေးဆိုင်များရောင်းကောင်းရန် အစီအရင်
စီးပွားရေးအတွက် လာဘ်ပွင့်ရန် ဈေးဆိုင်များရောင်းကောင်းရန် အလုပ်ခွင်တွင် အဆင်ပြေရန် အလုပ်မရသေးသူများ အလုပ်ရရန် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငွေဝင်လာဘ်ရွှင်စေတဲ့ အစီအရင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းရွက်ပေါ်တွင် စာရေးရမည့်အချိန်မှာ ၁၁ရက် ၉လ ယခုတစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ည ၉နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွင် ပြထားသော “ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်ပါရစေ”က ကွမ်းရွက် နှစ်ရွက်မှာ ရေးပါ။ ကျန်တစ်ရွက်မှာက မိမိဖြစ်လိုသော ဆုတောင်းတစ်ခုကို ရေးထည့်ပါ။ ဘောပင်ဖြင့်ဖြစ်စေ ခဲတံဖြင့်ဖြစ်စေ ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဆုတောင်းစာရေးထားတဲ့ ကွမ်းရွက်ကို အလယ်မှာထားပေးပါ။ […]
ပြည့်ဝ ချမ်းသာ ရေလုံငွေထုပ်ယတြာ
မိမိဟာ ရသလောက်ငွေတွေ ပြန်ကုန်နေတယ် လာဘ်ပိတ်ပြီး အရောင်းအဝယ်ပါးနေတယ်ဆိုလျင် ဒီအစီအရင် ယတြာလေးလုပ်ပါ။ ငွေ ၅၀တန် သို့မဟုတ် ၅၀၀တန် သို့မဟုတ် ၅ထောင်ကျပ်တန်ကို ခေါက်ပါ ပလတ်စတစ်အိပ်သန့်ထဲထည့်ပြီး ပိတ်ပါ။ နောက်ထပ် ပလတ်စတစ်အိပ်ထဲကို ထည့်ပြီး ရေအနည်းငယ်ဖြည့်ပါ။ အိပ်ကို သားရေကွင်းနဲ့ စည်းပါ။ စတင်ပြုလုပ်ရမည့်အချိန် ??နံနက် ၅နာရီ ၄၅မိနစ် (မည်သည့်နေ့တွင်မဆို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်)။ ဒီငွေအိပ်လေးကို မိမိငွေတွေထားတဲ့ ငွေသေတ္တာထဲ သို့မဟုတ် ဆိုင်ကောင်တာတွေပေါ်မှာ ထားပါ။ရေကိုတော့ […]
ဓနသိဒ္ဓိ လာဘ်ပွင့် အစီအရင်
လက်တွေ့ထူးခြားသူအများဆုံး အစီအရင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ရမည့်အချိန် နံနက် ၇နာရီ ၁၅။ ပြုလုပ်ရမည့်နေ့ မိမိမွေးနေ့ (ဥပမာ တနင်္လာသားသမီးဆိုလျင် တနင်္လာနေ့) လင်ဗန်းထဲတွင် ကော်ဖီ ၃ခွက်ကို ပန်းသီးနှင့်ထိပြီးထည့်ပါ။ ဖယောင်းတိုင်၅တိုင်ကို လင်ဗန်းနှုတ်ခမ်းတွင် ထွန်းပါ။ ရွတ်ဆိုရမည့် ဂါထာမှာ ဒိဝါတပတိ ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၆ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဆုကိုတောင်းပါ။(ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေပါက အလွန် အဆင်ပြေစေပါတယ်)။ ဘုရားကျောင်းဆောင်ကျဉ်းပြီး လင်ဗန်းနှင့်ကပ်မရသူများ သီးခြား စားပွဲ အမြင့်တစ်လုံးနှင့်ကပ်လှူနိုင်ပါတယ်။ ဖယောင်းတိုင်မီးများကို မငြိမ်းရပါ […]
27,9,2019 နံနက် ၅နာရီမှ ၉နာရီ ၄၅အတွင်း လှူနိုင်ပါတယ်။ သပြေ ၃ညွန့်ကို ပန်းအိုးသီးသန့်၁လုံးတွင် လှူပါ။ ရေသန့်ဘူး အသစ် ၁ဘူးကို အဖုံးဖွင့်လှူပါ။ အိမ်ဘုရားမှာလှူပါ။ အိမ်ဘုရား ကျောင်းဆောင်ကျဉ်းနေလျင် စားပွဲသီးသန့် ၁လုံးဖြင့် လှူနိုင်ပါတယ်။ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကို ၂၇ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပါ။ အမှုရင်ဆိုင်နေ၇သူ အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးခက်ခဲနေသူများ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာကို မိမိသက်စေ့ရွတ်လျင် ပိုကောင်းပါသည်။ ပန်းအိုးကို သပြေပန်းများ နွမ်းခြောက်ချိန်မှ စွန့်ပါ။ ရေသန့်က […]
လပြည့်နေ့မှာ လာဘ်ဖွင့်ပါ March 7, 2020
ဈေးအရောင်းအဝယ် ကောင်းချင်သူများအတွက် အစီအရင် ?? December 18, 2019
အရေးကြီးသော ကိစ္စတစ်ခု မမေးမြန်းခင် ဒီအရာလေးကို ပြုလုပ်ကြည့်ပါ December 8, 2019
ငွေကြေးပြန်ရစေ/ဆပ်နိုင်စေ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ယတြာ November 15, 2019
ဂြိုလ်ဝင်နေလား☀☀ ဂြိုလ်တိုင်သွားပါ☀☀☀ November 11, 2019
ဈေးအရောင်းအဝယ် ကောင်းချင်သူများအတွက် အစီအရင် ??
အရေးကြီးသော ကိစ္စတစ်ခု မမေးမြန်းခင် ဒီအရာလေးကို ပြုလုပ်ကြည့်ပါ
ငွေကြေးပြန်ရစေ/ဆပ်နိုင်စေ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ယတြာ
Baydin isaknowledge website for Myanmar Baydin. Visit us on Facebook Page.
Contact Us: +959 974665238
Address: 4B, Sanchaung, Yangon.
Copyright © 2019 | Baydin